Jab Harry met Sejal (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး – Gold Channel Movies
Jab Harry met Sejal (2017) မြန်မာစာတန်းထိုး
What You Seek is Seeking You.Aug. 04, 2017IN. 144 Min.
Harry က ဘဝကို​ပေါ့​ပေါ့ပဲဖြတ်​သန်းရင်း ဥ​ရောပကို အလည်​လာတဲ့ အိန္ဒိယလူမျိုး​တွေ အတွက်​ တိုးဂိုက်​လုပ်​တာ​ပေါ့ဗျာ။
ဥ​ရောပကို မိသားစုလိုက်​ အလည်​လာရင်း အ​ပျော်​​တွေလွန်​ပြီး Sejal ​တစ်​​ယောက်​ကလည်း ​စေ့စပ်​လက်​စွပ်​ ​ပျောက်​ပါ​လေ​ရောဗျာ။ ဖြစ်​ချင်​​တော့ လက်​စွပ်​က သတို့သားမိသားစုရဲ့ လက်​ဆင့်​ကမ်း အ​မွေ ဖြစ်​​နေ​တော့ သတို့သား​လောင်းနဲ့ စကားများရာက​နေ လက်​စွပ်​​ပျောက်​ရှာပုံ​တော်​ ခရီးစတင်​လာခဲ့​တေါ့တာပဲ။
လက်​စွပ်​ ပါမလာရင်​ အိမ်​ပြန်​ မလာဘူးလို့ ကြုံးဝါးပြီး လိုက်​ပို့တဲ့ တိုးဂိုက်​ Harry နဲ့ လည်​ပတ်​ခဲ့တဲ့​နေရာမှန်​သမျှ ​နေရာ ​တွေ ပြန်​ရှာရင်း ဘဝကို ဖြစ်​သလို​နေတဲ့ Harry ဟာ အချစ်​ နဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ ခံယူချက်​​တွေ ​လေးနက်​လာခဲ့သလို မိသားစု ထိန်းကွပ်​မှု့​အောက်​က Sejal ​တစ်​​ယောက်​လဲ လွတ်​လပ်​​ပျော်​ရွှင်​မှု့အရသာ​တွေကို နှစ်​သက်​လာ​တော့တာပါပဲ။
ဇာတ်​လမ်း​အ​နေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား​ပြောစရာ မရှိ​ပေမယ့်​ ဥ​ရောပ ​နေရာအနှံ့ကို တစ်​ထိုင်​​တည်း ရောက်​သွားရသလို ခံစားရပြီး တစ်​ခုနဲ့ တစ်​ခု မထပ်​​အောင်​ ထည့်​သွင်းထားတဲ့ ဇာတ်​ဝင်​​တေး​ကောင်း​တွေက ကြည့်​ချင်​စရာ​ကောင်းပါတယ်​။
IMDB 5.9 ပဲ ရှိ​ပေမယ့်​ ကြည့်​ကြည့်​လိုက်​စမ်း​ပါလို့ပဲ လက်​တို့လိုက်​တယ်​ဗျာ။
Review by: Thiha Thinn Hlaing
TMDb Rating5.5 16 votes
Download HD 870MB 10 months
Blockers (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Race Gurram (2014) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Thelma (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Bharat Ane Nenu (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Happy (2006) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Namiya (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
Flower (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး
The Art of Seduction (2005) မြန်မာစာတမ်းထိုး
211 (2018) မြန်မာစာတမ်းထိုး
How to Talk to Girls at Parties (2017) မြန်မာစာတမ်းထိုး